Dhul Gariir ku dhuftay Dalka Turkiga | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dhul Gariir ku dhuftay Dalka Turkiga
Wararka ka imaanaya dalka Turkiga ayaa sheegaya in dhul gariir xoog leh uu ku dhuftay gobolka xeebta ku yaal ee Izmir ee dalka Turkiga, waxaana dhul gariirkan uu sababay khasaaro kala duwan.
Waxaa laga dareemay dhul gariirkan oo cabirkiisu lagu qiyaasay 6.6magnitude cabirka Dhul gariirka qeybo kamid ah dalalka Turkiga iyo Gariiga, waxaana socda gurmad xoogan oo loo fidinayo dadka ay waxyeelada kasoo gaartay dhul gariirkan.
War kasoo baxay dowlada Turkiga ayaa lagu sheegay in dhul gariirkan sababay in dhismayaal badan soo dumeen, waxa ayna dowlada sheegtay in ay jiraan dad badan oo ku hoos jira dhismayaal kusoo dumay dhul gariirkan.
Dad ku dhaw 10-qof ayaa wararka horu dhaca ah sheegayaan in ay ku dhinteen dhul gariirkan, waxaana suurto gal ah in khasaaraha inta hada la ogyahay uu kasii bato lana helo meydadka dad wali nolol iyo geeri lagu la’yahay.
Previous articlehow to create a brand for your business
Next articleThe Philippines has confirmed the death of a military terrorist leader
Qaramada Midoobay ayaa ka digtay xiisadaha sii kordhaya ee bariga dhexe kadib dilkii loo gaystay Saynisyahankii ugu sareeyay Iran ee Nukliyeerka Mohsen Fakhrizadeh. Afhayeen u...
Cali Guudlaawe iyo Dabageed oo loo helay laba Malxiis oo ku...
Madaxweynihii hore ee Ghana oo geeriyooday